गोविन्द केसीले अदालतमा भने, ‘३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जीउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो’ - Hamrokhotang
Home » National » गोविन्द केसीले अदालतमा भने, ‘३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जीउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो’
गोविन्द केसीले अदालतमा भने, ‘३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जीउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो’
By: HamroKhotang.com on Tuesday, January 09, 2018 /
अदालतको अपहेलना आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. गोविन्द केसीले अदालतमा ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जीउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु आफ्नो मेरो कर्तव्य भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार डा। गोविन्द केसीको वयान लिएको छ । १४ वटा प्रश्न समेटिएको वयान केसीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । हेर्नुहोस् बयानको पूर्णपाठ
१ः हजुरको बाजे, बुबाको नाम थर वतन र हजुरको नाम थर बतन र पेशा व्यवसाय खुलाई दिनुहोस् ?
२ः हजुरको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ ? कुनै शारीरिक र मानसिक रोग छ छैन ? आज इजलाससमक्ष वयान दिन सक्नुहुन्छ या हुँदैन ?
३ः तपाई आज यस सर्वोच्च अदालतमा किन उपस्थित हुनु भएको हो ?
४ः हजुरले आफ्नो कुनै कानुन व्यवसायी यस मुद्दामा राख्नु भएको छ छैन ?
५ः यस प्रतिवेदनमा पेश भएको समाचार सामाग्री तथा प्रेस विज्ञप्ति देखाई सोधिन्छ, यो व्यहोरा तपाईको हो होइन ? तपाईले भन्नुभएको कुरा अशिष्ट, अमर्यादित र अदालतको अवहेलनाजनक हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ लाग्दैन ? बताई दिनुहोस् ।
६ः तपाईले के कति आधार र कारणबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ?
८: अदालतले संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादन गर्दछ भन्ने तपाईलाई थाहा छ छैन ? अदालतको आदेश फैसलाप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने र सजायँ समेत हुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ छैन ? खुलाई दिनुहोस् ।
९ः तपाईले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायधीश भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । यो अदालतप्रति घृणा सिर्जना गर्ने र अदालतको अवहेलना हुनेखालको हैन र ? हजुरको यस्ता शब्दले अदालतको सम्मान हुन्छ ?
१०ः तपाईले अदालतको आदेश र फैसलाप्रति चित्त नबुझे मर्यादित ढंगले असहमति व्यक्त गर्न सकिने अवस्थामा अदालतप्रति जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुका कारण के हो ? प्रष्ट पार्नु हुन्छ कि ?
११ः तपाई नागरिक समाजको अगुवा भन्नुहुन्छ । अदालतको आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउनेतर्फ तपाईले के गर्नुभयो ? के तपाईले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्नुभयो ?
१२ः के तपाईको चाहना अदालतको मुद्दामा तपाईले नै भनेवमोजिम फैसला हुनुपर्छ भन्ने हो ? होइन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाप्रति किन असहिष्णु हुनुभएको हो ? खुलाई दिनोस् ।
१३ः मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको न्यायपालिका विरुद्ध अमुख मुद्दामा भएको आदेशका कारण अनर्गल अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने दायित्ववोध तपाईलाई छ छैन ?
१४ः यस सवाल १ देखि १४ सम्म पढीबाची सुनाइन्छ कि यसविषयमा तपाईको अरु भन्नु केही छ कि ?
गरिमामय पदमा रहेको प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिन सक्ने न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको नेतृत्व निश्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आर्दशवादी, अनुकरणीय व्यक्ति हुनुपर्नेमा नागरिकतासम्वन्धी विवाद, चूडामणिसम्वन्धी राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया र नातावादसम्वन्धी लगायतका क्रियाकलाप गर्दा न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारणले निजबाटै अदालतको अवहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने हो । म उपर लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । निज सम्माननीय प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारवाही गरी न्यायालयको गरिमाको वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ । (अनलाइन खबरडटको सहयोगमा)
यसरी पक्राउ परेका थिए डा. केसी भिडियोमा हेर्नुहोस्